Ogaden News Agency (ONA) – HAWLGALADII CWXO OO HALKOODII KA SOCDA
HAWLGALADII CWXO OO HALKOODII KA SOCDA
Posted by ONA Admin	/ October 19, 2011
Waxaa halkoodii ka sii socda dagaaladii ay cwxo kaga soo horjeedeen gumaysiga doolka ku yimid dalka ogaadeenya. Waxaa Ogadenya soo maray gumaysiyo noocyo kala duwan u soo adoonsaday shacabka hasa ahaatee waligood kala horjeeday gumaysiga dagaalo gobanimodoon oy ku diidan yihiin heeryada gumaysiga.
JWXO oo hada hogaaminaysa halganka shacbiga Ogaadenya ayaa ku ballan qaaday inaan gumaysiga Itoobiya ku gam’in ciida Ogaadeenya, dunida ku dhex marin damaashaad iyo soo dhaweyn. Balantaas fulinteeda waxa dusha u ritay CWXO iyo jaaliyadaha shacabka Ogadenya ee qoraxda aanay ka dhicin.
Hawlagadii ugu danbeeyayna waxay u kala dhaceen sidan
29/09/2011 waxaa lagu gubay deegaanka Galaalshe gaadhi nooca dagaalka ah oo ay leeyihiin ciidamada cadawga kaas oo isaga iyo wixii saraaba la baabi,iyay
2/10/2011 hawlgal maalinimo oo laga fuliyay Dhaban oo ka tirsan degmada Garbo waxaa cadawga lagaga dhaawacay 2 askaro
3/10/ 2011 dagaal ka dhacay meesha lagu magacaabo Qay oo ka tirsan degaanka Garbo waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 2 askari 1 kala waa lagaga dhaawacay isla taariikhdan dagaal kale oo ka dhacay Bakhti waye oo Garbo ka tirsan waxaa cadawga lagaga dilay hal askari
10/10/2011 dagaal ka dhacay ceelka caanka ah ee Bulaale waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 8 askari waxaana lagaga dhaawcay 14 kale. Isla taariikhdan waxaa gudaha magaalada Garbo lagu dilay gudoomiye ku xigeenkii maamulka tigreega ee degamada Garbo
14/10/2011 waxaa deegaanka Galaalshe ay CWXO ku gubeen baabuur uu leeyahay cadawga oo ah nooca daabula ciidamada. Isla maalintaa ayaa waxaa lagu gubay baabuur uu lahaa cadawgu meesha lagu magacaabo Malka-madaw oo ka tirsan deegaan ka Galaaalshe oo loo adeegsaday miino. Baaburkan oo ahaa nooca qaada ciidamada ayaan waxba ka bixin isaga iyo wixii saraa
15/10/2011 waxaa dagaal ka dhacay tuulada Huuraale oo ka tirsan degmada dhagaxbuur lagaga dilay ciidamada cadawga 5 askari. Isla taariikhdan waxaa lagu baab’iyey hal baabuur oo ay ciidamada cadawgu leeyihiin iyo wixii saraa tuulada Qoloji
17/10/2011 dagaal gaadmo ah oo lagu fuliyay ciidamada cadawga oo hawlgal ku joogay Garigo’an waxaa lagaga dilay 3 sakari waxaana lagaga dhawaacay 2 kale
Wararku waxay intaa ku darayaan in ay jiraan dad maxaabiis ah oo lagala baxay jeelka way nee lagu ciqaabo shacbiga ogaadeenya ee loo yaqaan jeel Ogaadeen. Tirade maxaabiistan waxaa lagu sheegay ilaa iyo 20 ruux oo laga soo magacdhabay Guuleed Casoowe oo ahaa gacanyarahii koowaad ee ina ilay dadkan ayaa sida la sheegayo loo wareejiyay jeel ku yaal gobolka shawa
Dhanka kale waxaa jira dhac iyo boob loo gaysatay dad ganacsat yaryar ahaa oo waxoogaa ay nafta ku madadaalin jireen lagaga wareegay waxaana ka mid ah dadkaas Axmed yaasiin maxamed oo laga dhacay 35,000 oo bor iyo bagaash gaarayo 100,000 bir
very good job cwxo!
waan idinnla jirra meel aan joognaba!
ONA Mahadsanidin Qaabka wararka wax yar ka badala oo heading iyo conclusion u sameeya,